KORMI SAREE OFII SEERA TUMEE OFII DHAGAA ARRAABA! « QEERROO
February 9, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Wayyaaneen bara dhufaa darbaa ilmaan Oromoo doorsisuuf, qabsoo oromoo gara dabarsuufis ta’e bara taayitaa ishee dheereffattee barcuma ittiin kirkiraa jiru cabee badduu ba’uu oolchuuf takkaa qajeelfama, takkammoo seera, takka takkas labsii jechuun as bahaa har’a geessee jirti. Bara bulmaatashee tursachuuf yeroo itti seerota wal faallessan baastu illee argaa, dhagahaa har’a geenye. Bara 2006 uummanni guutuu biyyattii filannoo biyyaaalessaa bara sana ture irratti bahee mootummaa garboomfattuu wayyaanee akka hin barbaanne mul’ise. Bara sana guutummaan biyyattii raafama keessa seente.
Mormiin uummataas daran finiinee ture. Keessumaa magaalaan Finfinnee namni hunduu kun raajiidha hamma jedhutti mormii jabaan as baate. Bara sana mootummaan wayyaanee mormiin hamma kanaa na mudata jedhee hin yaanne. Akka nama osoo cidhaaf qophaawuu misirroon jalaa du’ee maassane. Kana tasgabbeessuufis labsii ji’ootan muraasaa jedhee labsee ture. Seera isaa isuma duula na filadhaa irratti namni kamuu mirga gurmaawuu, yaada isaa ibsachuus ta’e mootummaa mormuu qaba; mootummaa kan muudus kan buusus uummata jedhee lallabaa ture haalee namni kamiyyuu akka hiriira nagaa hin baane, heddummatanii bakka tokkotti walitti qabamuun yakka jedhee labsuu eegale. Kanarra darbee yerootti namni mana isaatti galu illee murtaawaa ta’ee ture. Namni kamuu galgala sa’a 4 booda akka hin sochooneef dhorke. Mootummaan weerartuu kun mirga keessani isa jedhee gurra nurraa ciraa ture mara deebisee lakkii kun yakka jechuun labsiidhaan dhorke.
Seerri mootummaan wayyaanee kufaatii of oolchuuf baasaa ooltee bultu kana qofaa miti. Seera labsii shororkeessummaa jechuun kan isheen labsattee ilmaan oromoo ittiin gidirsaa jirtullee labsii isheen kufaatii of oolchuuf baafatte keessaa isa tokko. Gaaffii uummata oromoo irraa yeroo gara yerootti ka’u qabbaneessuus ta’e fashalsuu akka hin dandeenye mootummaa kan ofiin jettu gareen garboomfattuu kun sirriitti beekti. Dargaggoota oromoo seeraan ala yeroo garaagaraatti hidhuu fi dararsuu ishee irraa kan ka’e mormiin uummatichaa daran hammaachaa dhufuus hubattee turte. Seeraan ala hidhaman akka hin jedhamneef seera seeraan alaa ( illegal legal) baasuuf dirqamte. Har’a maqaa shororkeessummaan, Adda Bilisummaa Oromoo ( ABO) waliin hidhata qabdu jedhamuun, akkasumas hordoftoota amantaa musliimaa barbaadde alshabaab waliin quunnamtii qabdu jedhamuun hidhaman lakkoofsaan ibsuun nama rakkisa. Mana hidhaa federaalaa kanneen jedhaman warreen akka baatuu, qilinxoo, showaaroobiit, qaallittii, maa’ikellaawwii fi kanneen biroo keessa jiran keessaa hidhamaan harka saddeettamii shanii ol ilmaan oromooti. Ilmaan oromoo hidhaman keessaa ammoo dhibbeentaan sagaltamaa ol maqaa labsii shororkeessummaan himatamanii jiru. Himatamtoonni kunneen shakkiidhaan, Shororkeessitoota waliin hidhata qabu jechuudhaan qabaman jedhamus, namni tokko bilisa illee kan gadi dhiifamu yoo ta’e yoo xiqqaate beellama waggaa 2 oliif mana murtiitti deddeebi’a. Har’a murtii tokko malee kanneen hidhamanii beellama dhuma hin qabne mana murtiitti deddeebi’aa, waraanni wayyaanee dararaa kan jiru ilmaan oromoo danuudha.
Mirga uummataa caalaa aangoorra bubbuluun waan isa yaachisuuf yeroo garagaraatti labsiiwwan haarawaa dhageenya. Amma ammoo muddamuu isaaf innuu ragaa bahee labsii yeroo muddamaa (emergency state) jechuun ji’oota ja’aaf labsatee biyyattii humna waraanaan bulchaa akka jiru namni martuu quba qaba. Akkuman duraan kaasuuf yaale labsiin kun seera seeraan alaa wayyaaneen ittiin aangoorra turuuf baaste keessaa isa tokko. Guutummaan biyyattii keessumaa ammoo guutuun oromiyaa duris afaanuma qawween bulti. Barataan oromoo mirga isaaf falmate duris ammas waraanni wayyaaneee fedhu ni ajjeesa, fedhu ni reeba, yoo barbaades ni hidha. Kan kana maaliif goota jedhee ilmaan oromoof falmu seerri haqaaf dhaabbate impaayera biyyattii keessa hin turre; ammas hin jiru. Egaan wayyaaneen fincila diddaa gabrummaa irraa gara fincila xumura gabrummaatti ce’uun falmii uummata oromoon irratti adeemsifamu seera ofii yeroo barbaaddetti akka barbaaddetti baastuun dhorkuuf labsii kana labsatte. Keessumaa ajjeechaa deettii ilmaan oromoo irratti guyyaa irreechaa raawwateen kan hedduu dallane uummatni oromoo, qabeenya diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun isaa barcuma wayyaanee danuu raase. Haala kanaan mormiin itti fufuun dhumaatii mootummaa garboomfataa kanaa akka ta’e hubachuun, ammas labsii haarawaan gadi nutti bahe. Akkuma amalasaa mootummaan murna bicuu TPLF mirguma kaleessa qabdu jechaa ture, har’a yakka gochuun dhalataa hedduu gara mana hidhaatti funaanuu eegale.
Erga labsiin hatattamaa kun bahee asitti ammoo karaa miidiyaaleesaa bu’aa koomaandi poostii jechuun lallabuu eegale. Jaleen isaa opdo’n as bahanii karaa raadiyoo fi TV wayyaanee erga labsiin kun bahee as nagaa arganne; amma nagaan baanee nagaan gala jirra jechuun ololuu eegalani. Marii karaa raadiyoo isaanii faanaa birood kaastiing (fana broadcasting) dhiheenya kana torbaan lamaan dura koree olaanoo koomaand poostii waliin taasisaniin ammoo amma nagaan bu’eera; labsiin kun bu’a qabeessa ture; yakkamtoota seeratti qabnee dhiheessineerra; kanneen hafanis dhihootti adamsinee qabna; nageenyi biyyattiis waan deebi’eef labsiin kun ni kaafama jechaa turani.
Bu’aa koomaand poostii wayyaaneen jettu kanaa garuu hundumti keenyayyuu argaa, dhagahaa jirra. Maqaa labsii kanaan waraanni wayyaanee hattuu seera qabeessa ta’ee muudame. Mana barbaade cabsa; qabeenya barbaade saama. Mirga kana mootummaa qaama ofiin jedhuun waan badhaafameef qaamni itti iyyatanis ta’e qaamni itti himatan hin jiru. Dargaggoota, maanguddootaa fi daa’imman oromoo waraana kanaan sababa malee qabamuun mooraa leenjii waraanaatti darbamanis hedduudha. Shamarran abbaa isaanii duratti, harmooliin abbaa warraa fi daa’imman isaanii duratti waraanaan akka gudeedamaa turanis hundumti keenyayyuu quba qabna. Egaa bu’aan koomaand poostiin nuuf buuse warreen kana.
Walga’iiwwan wayyaanee garaa garaa irratti, miidiyaalee fi oduu afarsitoota wayyaanee biroon torban tokkoon dura labsiin kun kaafamuufi nageenyi barbaadamu deebi’ee jira jedhan kunneen amma immoo deebisanii ji’oota afuriif labsiin kun itti fufa jechaa jiru.
Anis waa malee kormi saree ofii seera tumee ofii dhagaa arraaba hin jenne. Kaleessa kaafamuufi kan jedhe mootummaan kun osoo dhugumaan nageenyi biyyattii akkanni jedhu mirkanaawee jiraatee har’a ammo itti fufuuf jira nuun hin jedhan ture.
Akkuma labsiiwwan kanaan dura wayyaaneen baasaa turtee labsiin yeroo muddamaa kunis aangoorra buluuf malee uummataaf yaadamee akka hin taane beekamaadha. Boris aangoorra buluuf jecha labsii maqaa haarawaa qabu tokkoon dhufuuf akka jiran ni beekama. Labsii kana itti fufsiisuun wayyaanee ammoo sodaa sochii fincila xumura gabrummaa biyya keessatti finiinaa jiruun akka ta’e beekamaadha. Nageenyi biyyattii garuu kan deebi’uu danda’u; gaaffii uummataaf deebiin bilisummaa qofa akka ta’e ammas wayyaaneen hubachuu hin dandeenye. Labsii labsiin kaasanii, labsii labsiin bakka buusuun tasumaa furmaata fiduu hin danda’u.
Tarii wayyaaneef labsii baasaa oolanii buluun, ofii dubbatanii haaluun aangoorra waan ishee tursu itti fakkaachuu mala. Kun garuu biddeena abjuuti. Sichi labsii fi seerri wayyaanee warreen wal faallessan kunneen yoo fincila uummataa finiinsan malee sakaaluu hin danda’ani. Barcumni wayyaanee akka muka rirmi baroota hedduuf nyaatee keessasaa fixee, kan alaan waan bareedu fakkaachaa keessaan bososee, kan waan dhaabbate fakkaachaa osoo hin dhiibamin kufuu ta’ee jira. Sichi uummata oromoo qabaan wayyaanee gadi hin teessisu. Fincilli adeemsifamaa jiru hanga bilisummaatti itti fufa. Barri wayyaanee gabaabbateera. Amma biiftuun bilisummaa guyyaan itti baatu dhihaateera. Uummanni oromoo labsii wayyaanenis ta’e wayyaaneen erga buluu dhiisee bubbuleera. Ammas hanga wayyaanee tasumaa bakkaa balleessuutti labsiin qabsoo qabbaneessu hin jiraatu. Qabsoon itti fufa; bilisummaanis ni dhufa!
« OLOLAA FI KIJIBAAN LAFA CABSUUN GAAFFII UUMMANNI OROMOO GAAFACHAA JIRUUF DEEBII HIN TA,U.
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) Gur 9, 2017 »